ရွှေလုပ်သား: မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအတွက် စာသင်ခုံအလှူရှင်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊မဟာချိုင်မြို့၊ဝေလရပ်ကွက်(၁လမ်း)၌ မဟာချိုင်မြို့ မြန်မာအလုပ်သမား သားသမီးငယ်များ အတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အခြေခံ ပညာ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား /သူများအတွက် စာသင်ခုံ၁၅စုံခန့် လိုအပ် လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီး Thet Noung မှကမကထ နှိူးဆော်ပေးမှုကြောင့် DSA 41 ဆင်းအရာရှိများဖြစ်ကြသည့်...
‪၁။ဗိုလ်မှူးကြီး‬ ကျော်မင်းထွန်း( စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် ၄၁)မှ ၁ ခုံ၊
‪၂။‎လေယာဉ်မှူးကြီး‬ ကျော်ဇောလင်း(စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် ၄၁)မှ ၁ ခုံ၊
‪၃။ဦးနေထွန်းလင်း‬(စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၄၁)မှ ၂ ခုံ၊
‪၄။‎ဦးဟန်စိုးလတ်‬(စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်၄၁)မှ ၁ ခုံ၊
အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအတွက် စုစုပေါင်း စာသင်ခုံ ၅ခုံအား Ko Aung Thit Lwin မှ တဆင့်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုလို စေတနာသဒ္ဓါတရား တက်အားသ၍ လှူဒါန်းသည့်.....
93/49 Moo 4, Soi. Villa C 1 ,
Thasai . Muang .
A/c No. 464-2-54580-6
Mr.SOE LIN AUNG NO SURNAME
Ph:09 0661 0849/08 3735 2087
စာရေးသူ Labour Hittai အချိန် 19:15